Indoor Zvirimwa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Nzira yekuita Shefler musango?
Ungaita sei Shefler kugwenzi nenzira kwayo? Ini handisi kuzokuudza iwe kubva pa internet! Unofanirwa kudyara chirimwa chako kamwe chete, uchimwaya kamwe pazuva, uye nekudaro mazuva ese, mvura shoma, inofanira kumira ...
Chestnut care tips
Matipi ekuchengetedza macnutnuts emukati Ini ndaive neaknutnut yakadaro, ini ndinokuudza pasina zvinongedzo kuInternet, inokura mushe, inoda kudiridza muzhizha, hazvidi kuti uvige nzungu, munguva yechando inodonhedza mamwe emashizha mu ...
Ndeupi ivhu rinodiwa kuKalanchoe?
Nderupi rudzi rwevhu runodikanwa Kalanchoe? Iyo ivhu reKalanchoe inotorwa isina kwayakarerekera kana zvishoma acidic (pH 5,5-6,5). Zvirimwa zvinokura musanganiswa wakajairika wezvinwiwa zvinotapira. Zvirimwa zvidiki zvinoiswa mumusanganiswa wezvikamu zvina ...
Ndezvipi zvakakodzera kutarisira Muraya. Nemhaka yei maruva asina kukwana anowira mumakore mashoma 2 ainzi Murai muduku?
Ndeupi mutarisiro wakakodzera wemuraya. Nei maruva asina kubhururuka achidonha kubva kumakore maviri-mudiki muraya? Muchirimo ndakatenga muraika nemabukira. Zvakare nezve masendimita 2. Mutongo wevarimi vemaruva waive wakajeka - kwete kutumbuka ...
Nzira yekudiridza orchids?
kudiridza sei orchids? Ndakaudzwa kuti zvakafanira kugara uchiwedzera mvura mupani uye kuona kuti iriko nguva dzese, uye ndinoita saizvozvo. Hezvino zvekuita kugadzira orchid zvakare ...
Ndapota ndiudze kana zvichibvira kushandisa mwenje ye ultraviolet yemiti yemukati?
Ndokumbirawo kuti mundiudze kana marambi eUV anogona kushandiswa kumiti yemukati Ndatenda, ndakadzidza nezve ULF, asi zvinoita here kushandisa marambi eDNAT ekuwedzera kujekesa kwemiti yakadai semadomasi, mhiripiri, mbunda. Iko kushandiswa kweultraviolet ...
Nzira yekudyisa sei maruva phalaenopsis?
Nzira yekudyisa sei kukura phalaenopsis nemazvo? Phalaenopsis - isina girini yakasvibira, inogara ichikura orchids; yavo mhando uye mahybrids ari kutumbuka rinenge rese gore kutenderera akakodzera kune vanotanga. Nekutarisirwa kwakakodzera, Phalaenopsis inotumbuka zvakanyanya uye kwenguva yakareba ...
Ndiudzei chii chandingaita kana muchindwe ichisiya mazano akaoma ?? Pane mushonga unokosha here?
Ndiudze zvekuita kana iwo matipi emashizha emuchindwe akaoma? Pane fetereza yakakosha here? Ini handizive nezve kudiridza, asi mashizha echina anoonekwa sei pamuti wemuchindwe, wekutanga anotanga kuoma. Kufanira ...
Nzira yekuisa sei zvinotyisa? Ndinoda mirairo yakajeka yekutanga.
Nzira yekuisa sei zvinonaka? Ndinoda rairo yakadzama kune anotanga. Kusarudzwa kwehari. Izvo zvinodikanwa kuti usarudze saizi chaiyo uye chimiro chehari, zvinoenderana nekuvandudzwa kweiyo midzi sisitimu yerudzi rwecactus yauri kuenda ...
Chii chakaipa dieffenbachia? Nei tichiti inouraya?
Nei dieffenbachia ine njodzi? Sei zvichinzi zvine muchetura? nezve magurovhosi - anotonhorera! Uye zvakare mweya wekufema! Uye rimwe duramazwi! Ndakaverenga kuti zvinokonzeresa kushaya simba kwevanhurume uye zvine njodzi kune kitsi. Mboro yangu…
Maruva ari mudengu anofanira kunwa mvura?
Maruva ari mudengu anoda kudiridzwa here? iva nechokwadi Hungu, iva nechokwadi, maruva anonwawo mvura. uye inoda kuzadzikiswa zvakare. Iwe zvechokwadi unofanirwa kuidiridza !!! Tatiana, manheru akanaka! Iyi green sponge sponge inofanira kunge INOGARA yakafukidzwa nemvura !! ...
Mashizha akanganisa pa ficus
Ficus anosiya curl Panogona kuve nezvakawanda zvikonzero zveizvi. Kuti usabvisa zvirwere, iwe unofanirwa kunyatsoongorora shizha rakamonyoroka kuitira mavara uye zvisizvo. Kana zvirizvo, saka zvingangodaro ficus yako ...
chii chinonzi cactus
chii chinonzi green cactus ... neminzwa Cacti michero inotapira, iyo mitezo ine nyama yakafukidzwa nemapoka evhudzi rakadzika. Anenge ese macacti haana mashizha akajairika, mazhinji ane minzwa. Ivo…
Ndeipi nguva inokura mumiti?
Ndeipi nguva yekukura yezvirimwa? Iyo nguva yekusimudzira, kukura kunoshanda.Mubvunzo uyu watove pano http://otvet.mail.ru/question/17180703 Nguva yemiriwo (kubva kuLatin vegetatio kumutsiridza, kukura) inguva yegore umo kukura nekusimudzira zvinogoneka ...
Zvinoita here kuchekerera muti wemari? Matavi anorema kwazvo ... kurereka pasi ... uye kutyora ...
Zvinoita here kuchekerera muti wemari? Matavi anorema kwazvo ... kurereka pasi ... uye kutyora ... Zvakaoma! Ruoko rwangu harusimukirwe nebvudzi rakadaro. chokwadi unogona. Cheka zvakadaro zvaunoda, zvinobva ...
Ndeipi nguva yaunoda kubvisa mucheche waKasssula wechidiki?
Unofanira kusvina rini chirimwa chechidiki Crassula mafuta? Ini ndinotsinzina panobuda mashizha maviri madiki. Ndakaita yangu yakajairwa imwe. Kazhinji, inokura pano pasina kubatika ... Uye zvakadii ne ...
Sei mashizha achichinja? Ndezvipi zvinotarisirwa pamiti iyi?
Nei Kalanchoe Kalandiva mashizha achiita yero? Ndeupi rudzi rwechengetedzo runodikanwa kumuti uyu? Mashizha anoita yero odonha Mashizha ezasi echirimwa chevanhu vakuru anozoita yero nekufamba kwenguva ozodonha. Izvi ...
Ndezvipi mwenje zvinoshandiswa zvakanakisisa pakukura kannabis?
Ndeapi marambi akanakira kukura cannabis? Nezvekuwedzera kujekesa, marambi emwenje haana kukodzera kupenya, anongodya chete 3% yemagetsi akadyiwa uye mamwe ese emhepo anopisa. Rimwe rinogamuchirwa rambi sarudzo ...
Chii chirimwa "MORNING GLORY"
Chii chirimwa "MORNING GLORY" Ipomoea (Ipomoea Violacea); - mhuri: Convolvulaceae; - zita regeneral: Ipomoea; - mhando: violacea (Mangwanani Kubwinya) - mavambo: makomo ekumaodzanyemba kweMexico, Guatamala, West Indies, uye dzinopisa dzekuSouth ...
Ndeipi nyika inofanirwa zvakakodzerwa nemiti yemukati?
Ndeipi ivhu rakanakira zvirimwa zvemukati? Mazuva ano, zvitoro zvinotengesa musanganiswa wepasi wakasiyana wezvirimwa zvakasiyana. Verenga rondedzero pamapakeji, zvese zvinoratidzwa ipapo. Kune chipfuwo chako ipapo ...
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,559 masekondi.